Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia – Page 2 – Marqaannews
February 18, 2020 marqaan 1
Dowladda Mareekanka oo sheegtay in ay dishay Saraakiil Alshabaab sidoo kalena burburisay Saldhigyo waawayn.
War kasoo baxay taliska Howlgalada Mareykanka ee AFRIOM waxaa lagu sheegay in duqeyn ay ka geysteen Degmada Jilib ee Gobolka Jubada Dhexe ay ku bur-buriyeen Xarun Al-Shabaab ay ku lahaayeen [Read More]
February 18, 2020 Ali Osman 0
February 18, 2020 marqaan 0
DAAWO VIDEO DEG DEG Muqdisho Iyo Hargeysa oo isku Furantey Safarka Farmaajo Ka Hor,Wafdi Sland Muqdisho video hoos ka Daawo
AKHRISO:- Boliska Somaliland oo raali gelin kabixiyay falkii maanta ka dhacay Hargaysa “Gabadha la dharbaaxay maxay ahayd?”.
February 17, 2020 marqaan 1
Taliyaha Booliska Maamulka Somaliland Maxamed Aadam Saqadi ayaa shaqada ka ruqseysay Askri Booliis ah oo dharbaaxo la dhacay qof dumar ah oo ka mid ah Shacabka ku nool magaalada Hargeysa. [Read More]
SAWIRO:- Dhalinayaradii Somaliland oo wali kusii yaacaya Muqdisho “Majaajiliistayaal maanta kabaxsaday Burco”.
Majaajilaystayaasha reer Burco ee caanka ah oo kala ah Maroojiye, Mirqaan iyo Mudhxiye ayaa goordhoweyd ka degay Muqdisho. Kooxdan ayaa sheegay inay quus iyo rajo la’aan uga haajireen dalkooda halkaasna [Read More]
Muxuu Damaca Aby Ahmed ee uu ka leeyahay Somalia iyo Khariirada maanta uu soo bandhigay?.
R/Wasaaraha Dalka Itoobiya Aby Ahmed ayaa maanta Facebookiisa gaarka ah ku daabacay qoraal ay la socoto Khariirad muujinaysa in Somalia iyo Somaliland ay laba dal kala yihiin. Balse daqiiqado kahor [Read More]
DAAWO:-Saraakiishii SNM Oo Farmaajo Ugu Hanjabay Inay Dilayaan Haduu Hargaysa Yimaado & Arimo Halis ah
February 17, 2020 marqaan 3
Qaar ka mid ah Saraakiishii ururkii SNM iyo siyaasiyiinta Somaliland ayaa maanta ka hadlay safar la sheegay inay suurt-gal tahay inuu Hargeysa ku tago Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Guddoomiyaha [Read More]
DAAWO:-GUUL Laga gaadhay Khilaafkii Dawlada Soomaliya iyo Puntland Xildhibaano Warka Cadeyay Arimo halis ah
February 17, 2020 marqaan 0
Xubno ka tirsan labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo maanta shir jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in xal laga gaaray khilaafkii dhanka waxbarashada ee mudooyinkii dambe ka [Read More]
DAAWO:- Bishaar Al-Asad oo Guul Reer Galbeedka aysan raali ka ahayn ka gaaray dagaalka dalkiisa.
Ciidamada Dawlada Suuriya ayaa si buuxda ula wareegay magaalada Xalab oo ka mid ah deegaanadii ay iska hor imaadyada xoogani ku dhex mareen kooxaha mucaaradka dalkaasi Suuriya. Wararku waxay [Read More]
Degdeg:- DFS oo ka nixisay Shirkadaha Isgaarsiinta Dalka “Is diiwaan geli hadii kuma aqoonsanin”.
Hay’adda Isgaarsiinta Qaranka (HIQ) ayaa maanta ku dhawaaqday Hannaanka Mideysan ee Rukhsadaha Isgaarsiinta & Teknolojiyada dalka (Unified Licensing Framework – ULF), ka dib markii ay soo gabagabowday muddadii loogu talo [Read More]
DAAWO:- Wasiir Maareeye “28Sano ayay Somaliland lahayd Siyaasad Fadhiid ah oo Marfishyada looga taliyo, Farmaajo soo dhaweeya”.
Wasiirka Warfaafinta Somalila Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo waraysi lala yeeshay ayaa kahadlay warka kusaabsan safarka la sheegay in Madaxwayne Farmaajo ku wajahan yahay Hargaysa. Wasiir Maareeye ayaa fariin [Read More]
DAAWO Muuqaal Fadeexad ah:- Alifle katirsan Boliska Somaliland oo si xun laamiga ugu dhex garaacaya Gabar Dhalinyaro ah.
Taliyaha booliska soomaliland ayaa sheegay inay talaabo ka qaaden saddex alifle mahad abdi osman oo la ruqseeyey maadamu Qof Dumara ku gacan qaaday badhtamaha suuqa Hargeisa, Taaliyaha ayaa sheegay inay [Read More]
DAAWO:- Xildhibaan igu sawir ku tilmaamay safarka MD Farmaajo ee laga yaabo inuu ku tago Hargaysa.
Xilli waayihii dambe ay dadka somaliyeed isla dhexmarayeen warka kusaaabsan i Safar uu madaxwaynaha Somalia ku tagayo Magaalada Hargaysa ayaa waxaa dadka ka fikirka ka dhiibtay ka mid ah Xildhibaano [Read More]
DAAWO:- Dadka Muqdisho oo ku muransan booqashada Farmaajo ee Hargaysa “Qaar badan oo diidan iyo Sababta…”
Maalmihii la soo dhaafay waxaa jiray hadal-heyn ku saabsan in Madaxweynaha Somaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu tagayo Magaalada Hargeysa ee deegaannada Soomaaliya. Dad badan ayaa soo dhaweeyey in uu tago [Read More]
Xildhibaan Fowsia Xaaji oo si cajiib ah uga hadashay Booqashada la sheegay in Farmaajo ku tagayo Hargaysa.
Xildhibaan Fowsiyo Yuusuf Xaaji Aadan oo ka tirsan XIldhibaanada Golaha Shacabka kana soo jeeda Somaliland ayaa soo dhaweysay socdaalka la qorsheeyay in Madaxweynaha Farmaajo ku tagayo magaalada Hargeysa. Fowsiyo Xaaji [Read More]
DAAWO:- Xildhibaanada Harti ee kujira Federaalka oo Guul usoo hoyay Ardayda Puntland “Wax uu qaban waayay MD Deni”.
Waxaa xal laga gaaray Khilaaf u dhaxeeyay Wasaaradda Waxbarashada Xukuumadda Soomaaliya iyo Dowlad Goboleedka Puntlnd oo salka ku hayay qaadista Imtixaanka sanad dugsiyeedka iyo bixinta Shahaadaha Ardayda. Xildhibaanno katirsan Labada [Read More]
Askari Amerikaan ah oo lagu dhex dilay Xero meletery oo ku taal Dalka Jabuuti “Sheeko Cajiib ah”.
Dowladda Mareykanka ayaa soo saarey fahfaahin kooban oo ku saabsan askari Ameerikaan ah oo looga dilay gudaha Xerada Camp Lemonnier ee dalka Jabuuti. Wasaaradda Gaashaandhiga Maraykanka ayaa magaca askarigaas ku [Read More]
Alshabaab oo xukun ku fuliyay Nin lagu helay inuu kufsi ugeystay Gabar Bikro ah.
Dagaalamayaasha Al-shabaab ayaa fagaaro ku yaalla degmada Saakoow ee gobolka Jubbada dhexe waxaa ay xukun kula fuliyeen Nin lagu helay inuu fal kufsi ah u geystay Gabar kamid ah dadka [Read More]
Qatar ka dhan ah Puntland oo lagu soo bandhigay Buuraleeyda Gobolka Bari “Maxaa soo kordhay?”.
Kooxda Daacish oo Saldhigyo ku leh deegaano ka tirsan Maamulka Puntland ayaa waxaa ay soo bandhigeen Sawiro muujinaya dagaalyahano Cusub oo ku tababaranaya Xero ay ku leeyihiin Dhulka Buuraleyda ah [Read More]
Kenya oo xabsiga dhigtay nin war muhiim ah ku daabacay Facebook-giisa gaarka ah.
Laanta Dambi baarista Kenya ayaa xaqiijisay in Ciidamada Booliiska dalkaas ay xabsi dhigeen Nin Bartiisa Facebook soo dhigay digniin ku saabsan weerar ka dhici kara Goob Waxbarasho oo ku taalla [Read More]